Abasebenzi besikhungo ngosuku lwezempilo ekhempasini yase-Westville.
INyuvesi YaKwaZulu-Natali ne-UKZN Medical Scheme babambe uchungechunge lwezinsuku zempilo lapho bebekhuthaza ukuphila kahle kubasebenzi ngokomzimba, ingqondo nangenhlalo.
Amafutha egazini, umfutho wegazi, ushukela nesisindo somzimba bekuhlolwa abahlengikazi bakwa-Discovery Health.
I-Diabetes SA, i-ER24, abahlengikazi bakwa Discovery Health , iRevitalise Day Spa, iKlinikhi ye-HIV ne-AIDS yase-UKZN, Iklinikhi yase-UKZN yeBhayokhaynethiksi, nabafundi bomkhakha wezamehlo nabomkhakha wezenhlanzeko yomlomo bebemi ngomumo ukuze banikeze izeluleko nosizo.
Abesikhwama sempesheni i-UKZN Pension Fund nabo bebekhona ukuze babhekane nezokuphathwa kahle kwezimali, abebemele abakwa-Alexander Forbes nabo bebekhona ukuzophendula imibuzo.
Umfundi wonyaka wesibili wezifundo zenhlanzeko yomlomo uNkz Kholesa Vundisa uthe ‘Ukulawula ukubola kwamazinyo kuqala ekhaya. Ukuxubha ngendlela efanele nokulwisana nokunqwabelana kwe-plaque kunciphisa amathuba ezinkinga zamazinyo ngomuso.’
Umfundi weziqu ze-Masters kwiBhayokhaynethiksi uMnu Ebrahim Meer umeme abasebenzi, abafundi nomphakathi ukuthi bavakashele eKlinikhi YeNyuvesi YeZokunyakaza Kokuphilayo ekhempasini i-Westville ukuzolapha izingozi nokunakekela izifo eziwundendende ezifana noshukela.
UMeer uthe ‘Ukuzivocavoca kuyalapha.’ Uma ufuna ukuzobonana nabaseKlinikhi yeBhayokhaynethiksi shayela kulenombolo yocingo 031-260 7669 .
Umfundi wonyaka wokugcina ezifundweni zezaMehlo omele neklasi uMnu Muhammed Joosab, kanye nabafundi abangama-20 afunda nabo, bahlole amehlo abantu.
UNksz Megan James oyimenenja yakwa-Discovery Health Kwezobudlelwano Namakhasimende ukhuthaze abasebenzi ukuthi babhalise kwisizindalwazi sakwa-Discovery ukuze basebenzise izinsiza ezitholakala khona. Ubuye waphakamisa nokuthi basebenzise nezinye izinto eziwusizo ezihambelana ne-Medical Aid Scheme.
UNksz Philippa Hempson onguMphathi-Hhovisi we-UKZN Medical Scheme ukhuthaze abasebenzi base-UKZN ukuthi bavakashela izinsuku zempilo ezixhaswe i-UKZN Medical Scheme ukuze bathole ukuhlolwa futhi benze ngcono nezinga labo lezempilo.
Abasebenzi abebebambe iqhaza banikezwe izikhwama zokubandisa, imishini ebala ibanga olihambile, okokubamba umjuluko ekhanda, neziphuzo zakwa-Kauai.
Vakashela ku- www.employeewellnessukzn.ac.za ukuze uthole eminye imininingwane mayelana nokwenza ngcono impilo yakho